I-China Flange abavelisi kunye nabathengisi | Jiuhe
Olu hlobo lwe-Hexagon Flange Nut ikwabizwa ngokuba yi-pad nati, intyatyambo - izinyo lamazinyo, intsholongwane yeflange nokunye. Ihlala isetyenziselwa ukunxibelelana kombhobho okanye iziqwenga zomsebenzi ezifuna ukonyusa umphezulu we-nati. Yenziwe ngeprimiyum ngezinto ezintle ezenziwe kakuhle. Sisibambiso esineentambo zangaphakathi kwaye sisetyenziswa ngokudibeneyo kunye neebholithi, kwaye ingasetyenziswa njengenxalenye yoomatshini osetyenziswayo ngokudibeneyo nesikere ukudlulisa intshukumo okanye amandla. Ukongeza, i-Hexagon Flange Nut inezibonelelo ezibalaseleyo zodidi oluphezulu, ubomi obude benkonzo, ukuchaneka okuphezulu, ukunxibela, ukumelana notywala, ukwakheka komdibaniso, uyilo olubuthathaka, iindleko eziphantsi kunye neendleko eziphezulu ezisebenzayo. Inokufakwa ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi abahlukeneyo. Ngaphezu koko, sisiseko esilinganayo kunye nobungakanani bemisonto njengobubanzi be-hexagon, kodwa xa kuthelekiswa ne-hexagon nut ngokubanzi, iyinto enye kunye nesiqwenga somhlaba, kwaye ineepateni zamazinyo ezichasayo ngaphantsi, ezandisa indawo yomnxeba kwe-nati kunye nesiqwenga somsebenzi. Ke ngoko, uxinzelelo lomelele kunokudityaniswa kwe-nati eqhelekileyo kunye ne-washer. I-Hexagon Flange Nut ithandwa kakhulu ngabathengi bethu kwihlabathi liphela.
I-Hexagon flange nati: Ulwazi olusisiseko lwe-nati ye-flange yile ndlela ilandelayo: i-flange nati ine-ayini, ikwanayo nentsimbi engenasici.But iron isetyenziswa ngokuxhaphakileyo.kodwa ngokutsho komthengi kufuneka ngombala wokulungisa umbala.Unyango olunamandla lokwenza izinto luyakhusela indalo. Ukukhuselwa okungahambisani nokusingqongileyo.Indawo ene-zinc ikhusela imibala ye-zinc, ikhusela ukhuseleko kokusingqongileyo, ikhuselwe okusingqongileyo i-bluu zinc, ukhuseleko lwendalo emnyama zinc, njalo-njalo, ine-electroplating eqhelekileyo, i-zinc emhlophe, imibala ye-zinc, i-zinc emnyama, i-nickel emhlophe kunye nokunye.
Ukucaciswa komda (d) M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20
Isandi Umsonto obomvu 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2,5
Intambo entle1 / / 1 1.25 1.5 1.5 1.5 1.5
Intambo entle2 / / / 1 1.25 / / /
c ubuncinci 1 1.1 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 3
I-DC ubuninzi 11.8 14.2 17.9 21.8 26 29.9 34.5 42.8
e ubuncinci 8.79 11.05 14,38 16.64 20.03 23.36 26.75 32.95
k ubuninzi 5 6 8 10 12 14 16 20
ubuncinci 4.7 5.7 7.6 9.6 11.6 13.3 15.3 18.9
s ubuninzi 8 10 13 15 18 21 24 30
ubuncinci 7.78 9,78 12.73 14.73 17.73 20.67 23,67 29.67
Umphezulu I-Zinc plating mhlophe
Ubungakanani I-M4-M24 kwaye yamkele iShishini
1.OEM, uyilo lomthengi, iinkonzo zelebhile yomthengi ezibonelelweyo.
Isisombululo esiyingqayizivele nesingafaniyo sinokubakhona kubathengi bethu ziiNjineli eziqeqeshekileyo kunye nezochwephesha.
3.Sinokubonelela ngesampulu yasimahla itshe lakho.
Edlulileyo: Hex nati
Okulandelayo: Isikwere sesikwere